QORMADA JIMCAHA: Maxaa ka jira in Eden Hazard uu MUSLIM yahay, mase ogtahay in Hooyadii iyo Aabihii…? – Gool FM
Byare March 24, 2018
(Europe) 23 Maarso 2018. Qodobkeena Qormada Jimcaha waxaan usbuucan ku soo qaadan doonnaa laacibka Chelsea iyo xulka Belgium Eden Hazard.
Eden Michael Hazard wuxuu ku dhashay La Louvière balse wuxuu ku soo bar baaray Braine-le-Comte.
Hooyadii Carine iyo aabihii Thierry labaduba waxay ahaayeen laacibiin kubbada cagta ah, Aabihii oo qadka dhexe daafaca ka ciyaari jiray ayaa inta badan waqtigiisa ku qaatay heerka labaad ee horyaalka Belgium.
Balse hooyadii xariifad ayay ahayd oo waxay ka mid ahayd kooxda heerka koowaad ee Belguim balse way joojisay ciyaaraya markii ay qaaday uurka Eden Hazard.
Thierry ayaa isna ciyaaraha ka fariistay 2009-kii si uu waqtigiisa ugu huro caruurtiisa.
Labada waalid ee Hazard ayaa markii ay garoomada faarujiyeen noqday macallimiin ciyaaraha ah.
Hazard ayaa u wayn afar la dhalatay. Waxaa la dhashay saddex wiil oo wada ciyaaryahan ah, Thorgan Hazard oo soo maray Chelsea balse iminka u ciyaaray Borussia Mönchengladbach iyo Kylian Hazard oo iminka Blues kala tirsan.
Maxaa ka jira in Eden Hazard oo MUSLIM yahay???
Inta badan dadyowga isticaala Internet ka gaar ahaan kuwa ciyaaraha daneeya ayaa aaminsan in Eden Hazard uu Muslmim yahay.
Hazard ayaa marar badan baraha Bulshada ummada Islaamka ah ugu soo hambalyeeyay Bisha Ramadaan iyo Ciida, balse sidaa si la mid ah Gaalada wuxuu ugu hambalyeeyay Ciida Christmas-ka.
Sidaa darteed waxaa meesha ka muuqda inuu tix galinayo asxaabtiisa iyo diimaha ay heystaan.
Ma jiraan war bixin rasmi ah ama wareysi laacibka laga hayo oo sheegaya inuu Muslim yahay, laakiin wararka ugu dhow ee la qaadan karo ayaa sheegaya in Hazard uusan wax diin ah lahayn.
Dalka Belgium ayaa waxaa ku badan dadka aan diinta heysan iyadoona Hazard loo badinayo inuu qoomkaas ka mid yahay.
Laacibkii hore ee Chelsea Demba Ba kaas oo ah muslim ayaa mar xaqiijiyay in Hazard uu diinta islaamka waxyaabo badan ka fahansan yahay, Isla markaana uu aayadaha Qur’aanka Macnahooda wax ka waydiiyo mararka qaar.
Ba ayaana markaa sheegay inuu rajeynayo in Hazard uu qaadan doono diinteena Suuban.
Eden Hazard ayaa lagu xusuustaa sidii uu uga soo horjeestay in yuhuudu ay marti galiso koobka euro 2013 ee ciyaartoyda ay da’doodu ka yartahay 21-jirada.
“In Israa’iil la siiyo marti galinta koobka Euro ee ciyaartoyda ka yar 21-jirada kaddib dagaalkii Qaza, waxay u muuqataa in Israa’iil lagu abaal marinayo falkoodii xumaa” ayuu yiri Eden Hazard.
Sikastaba, Ma jiraan warar rasmi ah ama hadal uu yiri isaga oo xaqiijinaya inuu Heysto Diinteena Islaamka, waloow ay website yada qaar Hazard ku soo dareen xiddigaha Muslimiinta ee ka ciyaarta Premier League.
Xulka Talyaaniga oo caawa xiran doona funaanad khaas ah + Sawirro (Sabab?)
MUUQAAL: Ronaldo oo Xalay soo bandhigay Farasamo ugu dambeysay berigii Manchester United